Kwi-intanethi Dating kwaye Unxibelelwano Ngekhompyutha Isitshayina Dating
Ukusilela zithungelana okanye inability ukuba zithungelana ngempumelelo lo rhoqo isizathu sokuba kutheni budlelwane nabanye kusilela, abanye nkqu phambi kokuba uqale. Nge-intanethi dating, nokunxibelelana kubaluleke nangakumbi crucial ngenxa kuphela unxulumano abantu ababini baya kuba kwaye ngomhla oko banako nokwakha budlelwane ukuba banako kanjalo wamsukela kwi-real ihlabathi ngumsebenzi wabo kwi-intanethi unxibelelwano. Ingakumbi xa umntu ufumana ngakumbi osetyenziselwa kwaye ethambileyo kunye expressing ngokwabo nge-physical uqhagamshelane kunye namanyathelo, unxibelelwano nge-mazwi kusenokuba nzima kwaye nkqu ama. Kodwa njengoko ixesha elide njengoko omnye ngu-honest malunga yakhe emotions, ngoko amazwi kuza ngokulula. Unxibelelwano, nangona kunjalo, yindlela-bubini-indlela street omnye kufuneka andazi kuphela indlela zichaziwe ngokwakhe herself ngempumelelo, kodwa kanjalo njani mamela. Ironically, amazing advancements kwi-unxibelelwano iteknoloji abanalo wenza ngayo nayiphi na kuba lula ukuba abantu zithungelana ngempumelelo kunye ngamnye nabanye, ingakumbi apho budlelwane nabanye ngabo abachaphazelekayo.
Dating websites kuvumela abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi ukuhlangabezana nokuphuhlisa budlelwane nabanye kwaye ezahlukeneyo kwaye iluncedo kakhulu messaging izixhobo ezikhoyo kwi-intanethi ukwenza ukuqhagamshela ngamnye ezinye njengoko kulula njengokuba nqakraza iqhosha. Kodwa budlelwane nabanye kuqhubeka kusilela nangona ezi wongeza technological okuninzi. Ezi advancements, kunjalo, kuphela usinike ngcono kwaye cooler izixhobo ukuba idityanisiwe kodwa ihlala ingu phezulu kuthi ukwakha personal unxulumano kunye nomnye umntu nge-nokunxibelelana. Ezi remarkable izixhobo ingaba engakumbi ngathi izandiso zethu fingers kwaye vocal chords thina? kufuneka sebenzisa intloko yethu kwaye emotions ukuba ngempumelelo ukunxulumana komnye umntu. Kwi-real ihlabathi, sikwangawo aided yi-zethu gestures kwaye amehlo ethu xa sifuna buyisela nge umyalezo. Abantu abo umhla kwi-intanethi, nangona kunjalo, ingaba kuphela ukuba limited ukubhalwa kwaye verbal unxibelelwano. Baya kuba iteknoloji kwaye baye kanjalo unako sebenzisa obu bugcisa ukufumana ilungelo amazwi ukuthi kodwa phambi kokuba uyakwazi ukusebenzisa la mazwi ukuba ngempumelelo ukunxulumana umntu ongomnye, kufuneka kuqala qiniseka ukuba amazwi enu bamele kanjalo iisepha zokucoca zidityanisiwe engqondweni yakho kwaye emotions. Ekubeni a ekhuselekileyo unxulumano phakathi amazwi enu kwaye engqondweni yakho kunye nemvakalelo kuthetha expressing ukuba ucinga ntoni kwaye uzive honestly. Honesty, emva zonke, yeyona nto ibalulekileyo kwinto ka-nokunxibelelana. Nibe sebenzisa cinga ngamazwi okanye elula okkt nibe ifomu complex izivakalisi okanye beautiful poetry ube kakhulu talented wordsmith. Ngaphandle honesty, nangona kunjalo, amazwi enu aya ngxi kuba nanto intsingiselo.
Honest intetho, ke ngoko, ukuba aguqulele nokunxibelelana
Ingaba usenama-undecided malunga imizwa yakho kuba umfazi wena unxibelelwano nge-intanethi kwaye ingaba azikathi ilungele umhla wakhe exclusively? Vumelani yakhe uyazi yintoni le meko ke yena akayi kuba okulindelweyo ukuba uza kuba ayinako ukuba ahlangane kwaye apho, ngokulandelelanayo, babe ngokupheleleyo ruin yakho chances ka-exploring imizwa yakho kuba yayo ngaphaya koko, ukuba wena kamva baqonde ukuba le into ofuna ukuzenza. Ingaba unayo nayiphi na injongo ndimke ilizwe lakho kwaye relocating komnye ukuba ube kunye umlingane wakho? Ukuba ufuna musa t, qiniseka ukuba nayiphi na kwezo meko iqabane lakho kufuneka ahlangane-intanethi ikuqonda oku ukususela kakhulu ekuqaleni ngoko ke zombini uza kwazi phambi kwexesha ngokwaneleyo ukuba le into isenako kuba ihamba kakuhle okanye ukuba kuyinto yaba-breaker. Ingaba unayo-mali izibophelelo ukuba kufuneka silindele yakho kwixesha elizayo iqabane lakho ukuba akuncedise naye? Kuba honest malunga iimfuno zakho ngoko awusayi nika anybody i-impression ukuba uyakwazi kunikela unlimited-mali yokhuseleko. Emva zonke, ukuba ukwanalo uthando kwaye ukuzinike ukunikela kwaye kufuneka ahlangane umfazi lowo unako kukunika enye, ngoko ke ekuncedeni ngamnye enye ngaphandle nje uza kuba onikiweyo. Honesty ukususela kakhulu ekuqaleni kuya kubonisa ukuba ubudlelwane ngu kukunceda kakhulu umleqa. Ukusuka apha kwi ngaphandle, nokunxibelelana ngamnye kunye nezinye uza enyanisweni kulandela. Ukusilela zithungelana okanye inability ukuba zithungelana ngempumelelo lo rhoqo isizathu sokuba kutheni budlelwane nabanye kusilela, abanye nkqu phambi kokuba uqale. Nge-intanethi dating, nokunxibelelana kubaluleke nangakumbi crucial ngenxa kuphela unxulumano abantu ababini baya kuba kwaye ngomhla oko banako nokwakha budlelwane ukuba banako kanjalo wamsukela kwi-real ihlabathi ngumsebenzi wabo kwi-intanethi unxibelelwano. Ingakumbi xa umntu ufumana ngakumbi osetyenziselwa kwaye ethambileyo kunye expressing ngokwabo nge-physical uqhagamshelane kunye namanyathelo, unxibelelwano nge-mazwi kusenokuba nzima kwaye nkqu ama. Kodwa njengoko ixesha elide njengoko omnye ngu-honest malunga yakhe emotions, ngoko amazwi kuza ngokulula. Unxibelelwano, nangona kunjalo, yindlela-bubini-indlela street omnye kufuneka andazi kuphela indlela zichaziwe ngokwakhe herself ngempumelelo, kodwa kanjalo njani mamela. Ironically, amazing advancements kwi-unxibelelwano iteknoloji abanalo wenza ngayo nayiphi na kuba lula ukuba abantu zithungelana ngempumelelo kunye ngamnye nabanye, ingakumbi apho budlelwane nabanye ngabo abachaphazelekayo.
I-intanethi dating kakhulu okulungileyo umzekelo
Dating websites kuvumela abantu ukusuka zonke phezu kwehlabathi ukuhlangabezana nokuphuhlisa budlelwane nabanye kwaye ezahlukeneyo kwaye iluncedo kakhulu messaging izixhobo ezikhoyo kwi-intanethi ukwenza ukuqhagamshela ngamnye ezinye njengoko kulula njengokuba nqakraza iqhosha. Kodwa budlelwane nabanye kuqhubeka kusilela nangona ezi wongeza technological okuninzi. Ezi advancements, kunjalo, kuphela usinike ngcono kwaye cooler izixhobo ukuba idityanisiwe kodwa ihlala ingu phezulu kuthi ukwakha personal unxulumano kunye nomnye umntu nge-nokunxibelelana. Ezi remarkable izixhobo ingaba engakumbi ngathi izandiso zethu fingers kwaye vocal chords thina? kufuneka sebenzisa intloko yethu kwaye emotions ukuba ngempumelelo ukunxulumana komnye umntu. Kwi-real ihlabathi, sikwangawo aided yi-zethu gestures kwaye amehlo ethu xa sifuna buyisela nge umyalezo. Abantu abo umhla kwi-intanethi, nangona kunjalo, ingaba kuphela limited ukuba ukubhalwa kwaye verbal unxibelelwano. Baya kuba iteknoloji kwaye baye kanjalo unako sebenzisa obu bugcisa ukufumana ilungelo amazwi ukuthi kodwa phambi ungasebenzisa la mazwi ukuba ngempumelelo ukunxulumana umntu ongomnye, kufuneka kuqala qiniseka ukuba amazwi enu bamele kanjalo iisepha zokucoca zidityanisiwe engqondweni yakho kwaye emotions. Ekubeni a ekhuselekileyo unxulumano phakathi amazwi enu kwaye engqondweni yakho kunye nemvakalelo kuthetha expressing ukuba ucinga ntoni kwaye uzive honestly. Honesty, emva zonke, yeyona nto ibalulekileyo kwinto ka-nokunxibelelana. Nibe sebenzisa cinga ngamazwi okanye elula okkt nibe ifomu complex izivakalisi okanye beautiful poetry ube kakhulu talented wordsmith. Ngaphandle honesty, nangona kunjalo, amazwi enu aya ngxi kuba nanto intsingiselo.
Ingaba usenama-undecided malunga imizwa yakho kuba umfazi wena unxibelelwano nge-intanethi kwaye ingaba azikathi ilungele umhla wakhe exclusively? Vumelani yakhe uyazi yintoni le meko ke yena akayi kuba okulindelweyo ukuba uza kuba ayinako ukuba ahlangane kwaye apho, ngokulandelelanayo, babe ngokupheleleyo ruin yakho chances ka-exploring imizwa yakho kuba yayo ngaphaya koko, ukuba wena kamva baqonde ukuba le into ofuna ukuzenza. Ingaba unayo nayiphi na injongo ndimke ilizwe lakho kwaye relocating komnye ukuba ube kunye umlingane wakho? Ukuba ufuna musa t, qiniseka ukuba nayiphi na kwezo meko iqabane lakho kufuneka ahlangane-intanethi ikuqonda oku ukususela kakhulu ekuqaleni ngoko ke zombini uza kwazi phambi kwexesha ngokwaneleyo ukuba le into isenako kuba ihamba kakuhle okanye ukuba kuyinto yaba-breaker. Ingaba unayo-mali izibophelelo ukuba kufuneka silindele yakho kwixesha elizayo iqabane lakho ukuba akuncedise naye? Kuba honest malunga iimfuno zakho ngoko awusayi nika anybody i-impression ukuba uyakwazi kunikela unlimited-mali yokhuseleko. Emva zonke, ukuba ukwanalo uthando kwaye ukuzinike ukunikela kwaye kufuneka ahlangane umfazi lowo unako kukunika enye, ngoko ke ekuncedeni ngamnye enye ngaphandle nje uza kuba onikiweyo. Honesty ukususela kakhulu ekuqaleni kuya kubonisa ukuba ubudlelwane ngu kukunceda kakhulu umleqa. Ukusuka apha kwi ngaphandle, nokunxibelelana ngamnye kunye nezinye uza enyanisweni kulandela
← Free incoko ngaphandle yobhaliso ye-intanethi dating kwaye chatting
Kuhlangana Xiao kufa, Ebukekayo Companion Doll Wakha ukuba Nceda Lonely Abantu kwi-China Tech iindaba namhlanje →